Nke a bụ otú ụwa si ele anya n'oge "Oge awa" | Network Meteorology
Foto: Nke a bụ otú ụwa si ele anya n'oge »Oge Awa»
Ikpeazụ Saturday March 25 nwere pụrụ nnọọ iche hour: bido na elekere asato nke elekere ano rue elekere anya ano nke elekere ano na mba obula oriọna ya bu iji wee mata maka mgbanwe ihu igwe. Ọ bụ Oge awa, ihe dị ka nkeji 60 nke kwesịrị ịdị, kwa ụbọchị, ka anyị na-eru ebe anyị na-apụ na mbara igwe mgbe anyị na-emerụ ya.
Mana anyị agaghị ekwu maka ihe dị mwute, kama gbasara ọmarịcha foto ọ hapụrụ anyị na Machị 25, 2017. Otú a ka ụwa dị n’ụbọchị ahụ.
Templelọ A Wat Arun dị na Bangkok. Foto - Ambito.com
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ obodo 7000 sitere na mba karịrị 150 sonye na »Oge Awa», ihe omume nke World Wide Fund for Nature (WWF) na-ahazi maka afọ 10. Ihe omume ahụ n'onwe ya dị mfe: ọ mejupụtara ịgbanwu ọkụ ruo ọtụtụ awa, mana mgbe nde mmadụ mere nke ahụ, nsonaazụ ya nwere ike ịpụta ọhụụ. Dị ka ọ dịla.
Brazil, Bangkok, Madrid, Bilbao, na ọtụtụ, ọtụtụ ndị ọzọ chọrọ isonye na nnukwu ihe omume a nke kwere nkwa ịbụ akụkọ ihe mere eme, n'ihi na oge a, na dị ka ọ dị na mbụ, agbakwunyela ọtụtụ narị ụlọ akara na ndepụta nke ndị ha bụ n'ọchịchịrị maka otu awa, dị ka Moscow Kremlin.
Sydney (Ọstrelia). Foto - David Gray
Ndị mbụ mere ememme a bụ ndị Australia, ndị ha mechiri Harbor Bridge na Sydney Opera House, obodo ebe atụmatụ a malitere na 2007. N'oge ahụ, ọ nwere ihe dị ka azụmahịa 2000 na nde mmadụ 2,2, mana n'afọ na-esote, e nwere nde mmadụ 50 si na mba 35.
Towerlọ Elu Tokyo (Japan). Foto - Issei Kato
N'Eshia, ha chọkwara inye onyinye maka ájá ájá. Na Japan, Towerlọ Tokyo dị ka nke a site na 20.30pm ruo 21.30pmma Na Bangkok isi obodo Bangkok, ụlọ arụsị ama ama Wat Arun gosipụtara ọmarịcha mma ya n'abalị nke Satọde.
La Cibeles na La Puerta de Alcalá na Madrid. Foto - Victor Lerena
Spain achọghị ka a hapụrụ ya n'azụ. Madrid sonyeere ụzọ ahụ site na ịgbanyụ La Cibeles na Puerta de Alcalá; mgbe Bilbao gbanyụrụ ụlọ ihe nkiri nke Arriaga:
Rilọ ihe nkiri Arriaga, na Bilbao. Foto - Miguel Toña
Gi onwe-gi, i gbanyuru oriọna? 🙂
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Foto » Foto: Nke a bụ otú ụwa si ele anya n'oge »Oge Awa»
Kedu ihe bụ oge awa nke ụwa?